iOS 11.1 Beta 5 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira | IPhone nhau
iOS 11.1 Beta 5 Zvino Inowanikwa kune Vagadziri
Mune isingasviki vhiki matatu mabetas eIOS 11.1, izvo zvinonyatsoratidza kuti Apple yaisa mabhatiri uye inoda kuti iyo vhezheni iwanikwe kupera kwaGumiguru. Nhasi ichangoburitsa Beta yechishanu yeIOS 11 yevagadziri, pamwe nemamwe maBetas emamwe masisitimu anoshanda ekambani.: tvOS uye macOS ..
iOS 11.1 Beta 5 inosvika kuti ienderere mberi nekukwenenzvera iyi vhezheni itsva ichaunza Nhau dzakakosha senge kudzoka kwe3D Kubata kwe multitasking, kudzoka kweReachability musimba rakazara kumidziyo yedu uye nedzimwe shanduko dzakakosha senge kuvandudzwa kwekuchengetedza kugadzirisa gomba rakakomba rakasiiwa nekutadza kweWPA2 kiyi dzeWiFi yedu.
Mazana em emoji matsva ekugona kutaurira zvese zvatinoda kuburikidza nemifananidzo, kukwanisa kuwana multitasking kana kushandura zvinoshandiswa nekudzvanya uye 3D Kubata padivi rekona, kana kushandisa Reachability kuwana iyo Notification Center kubva pakati pekona uye nekudaro kukwanisa kushandisa iPhone yedu neruoko rumwe, kunyangwe iyo 5,5-inch Plus modhi. Aya mashandiro anosarudzika kune iwo madhizaina ane skrini inoenderana ne3D kubata (iPhone kubva pa6s zvichienda mberi).
Pamusoro pekuvandudza uku kune vamwe vakagara vachitaurwa nerunyerekupe kwenguva yakareba, seApple Pay Cash, kuti Apple iri kutoedza nevashandi vayo nevashandi vevashandisi isati yaiburitsa kuruzhinji, uye kuti inotarisirwa kusvika neshanduro yekupedzisira. Isu tinotarisirawo kuti iCloud Messages syncing ichave pano munguva pfupi, chimiro Apple yakaziviswa kuWWDC 2017 asi yakazodhonzwa, uye hatina kuzonzwa zvakare. Pamwe chete neIOS 11.1 Beta 5, macOS 4 uye tvOS 10.13.1 Beta 11.1 dzakaburitswawo. Parizvino isu hatina chatinoziva nezve watchOS, kunyangwe zvisina kurambidzwa kuti vanozoivhura mumaawa mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11.1 Beta 5 Zvino Inowanikwa kune Vagadziri
«Kana shandisa Reachability kuti ukwanise kuwana iyo Notification Center kubva pakati pekona uye nekudaro kukwanisa kushandisa iPhone yedu neruoko rumwe, kunyangwe iyo 5,5-inch Plus modhi. Aya mashandisirwo anosarudzika kune iwo madhizaina ane skrini inoenderana ne3D kubata (iPhone kubva 6s zvichienda mberi) »
Kuwanika kunowanikwa pane ese maPhones 6 zvichikwira, kwete ma6.
«, Kubva 6 zvichienda mberi,» *
Right ... ndanga ndichifunga nezve iyo 3D kubata uye ndikatakurwa
Mune yepamutemo vhezheni 11.0.3 yangu iPhone inodya bhatiri haigare kusvika masikati, mumwe munhu akaisa beta vhezheni yeIOS 11.1 mune 7 plus anogona kundiudza kuti zvinoshanda sei ???
OSWALDO ORTEGA akadaro
Iyi yazvino beta iri kuenda yakanakisa. Kubva pa4 iwe unogona kuona mutsauko mune zvakawandisa uye kunyanya nenyaya yebhatiri, mune yangu iPhone 7+ yakakwana uye inokurudzirwa zvakanyanya. Kwaziso.
Pindura OSWALDO ORTEGA
Parizvino uye ini ndakaiisa kubvira 23:00 ini ndinoona kumhanyisa, kushomeka uye kuzvitonga kuzere, chidimbu cheruzivo, chabuda muchaja na06: 40, ndafona, katatu kushanya kuFacebook , maemail matatu uye mapikicha maviri, uye angu matanhatu pamwe chete ari pasi pe3% chete, uye ndi6: 96.
Parizvino iyi Beta yakakwana
Samsung inogona kuvhura isina waya yekuchaja base senge Apple's AirPower